Ithini imigaqo ye-Airbnb malunga nezikhali kwindlu? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ithini imigaqo ye-Airbnb malunga nezikhali kwindlu?
Eyethu Imigangatho nolindelo lufuna ukuba zonke izikhali ezikhoyo endlwini zigcinwe kakuhle kwaye zikhuseleke. Ukuba isikhali sisekuhleni okanye sisenokubonwa lundwendwe, kufuneka ichazwe loo nto kwimithetho yekhaya. Iindwendwe nazo kufuneka ukuba zichaze zize zifumane imvume yokuba naso nasiphi na isikhali esikhuselekileyo ngaphambi kokubhukisha, loo nto siyenze ngejelo lokuthumela imiyalezo.
Ukuba khange kuchazwe kwangaphambili ngesikhali, aze umamkeli ndwendwe okanye undwendwe lufune ukulirhoxisa olo bhukisho, i-Airbnb iya kuvumela ukurhoxisa ngaphandle kwesohlwayo.
Phawula: Zonke izikhali ezikhoyo kwizindlu kufuneka zikhuseleke zize zifihliwe. Abantu abaphula olu lindelo basenokunqunyanyiswa okanye basuswe kwisayithi.
Izinto ezijongwa njengezikhali
Nantoni na enokusetyenziselwa ukudubula ijongwa njengesikhali. Oku kuquka, kodwa kungaphelelanga apha: Imipu eqhelekileyo, imipu yoombayi-mbayi, nasiphi isixhobo zokuzikhusela esifana ne-tasers okanye i-pepper spray, naluphi uhlobo lweembumbulu, kunye nezinto ezingathi yimipu.
Iindidi ezamkelekileyo zokugcina izikhali ngokukhuselekileyo
Izivalo okanye iikhabhinethi ezitshixwayo kunye nezinye izixhobo zokutshixa zamkelekile kwiindlela zokugcina. Ukugcinwa okukhuselekileyo kufuneka kuqinisekise ukuba ngabasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abazifumanayo.